EPL: Liverpool oo guul soo laabasho ah ka gaartay kooxda Burnley oo marti u ahayd… + SAWIRRO – Gool FM
Laporta oo shaaca ka qaaday fikradiisa ku aadan dib u cusbooneysiinta qandaraaska Osman Dembele
Toni Kroos oo iska indho tiray magaca Cristiano Ronaldo!
EPL: Liverpool oo guul soo laabasho ah ka gaartay kooxda Burnley oo marti u ahayd… + SAWIRRO
Haaruun Yuusuf March 12, 2017
(Liverpool) 12 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guul soo laabasho ka gaartay naadiga Burnley oo marti u ahayd kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana ay gacanta ku dhigtay saddexda dhibcood ee kulankan.
Liverpool ayaa goolka looga naxsaday waxaana daqiiqadii 7-aad ee bilowgii ciyaarta ugu shubay laacibka kooxda Burnley ee Ashley Barnes kaddib caawin uu ka helay Matthew Lowton, Reds ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Dhammaadii qeybtii hore ee ciyaarta ayaa intii lagu guda jiray daqiiqaddii lagu kordhiyey ciyaarta waxa ay Liverpool la timid goolka barbaraha waxaa u dhaliyey Georginio Wijnaldum, kaddib markii uu bartanka xerada rigoorada kooxda Burnley ka helay kubbad dadab laga soo qaaday, isagoo si deggan shabaqa u gaarsiiyey kulanka ayaana lagu kala nastay gar isku mid ah 1-1.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Liverpool ayaa la wareegay hoggaanka kulanka waxaana 61’daqiiqo laad xoog leh oo uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa oo joog hoose ku socday shabaqa gaarsiiyey Emre Can, kaddib baas uu ka helay Divock Origi, kulanka ayaana sidaas ku moqday 2-1 looga gacan sarreeyey Burnley.
Reds ayaa isku dayday inay goolasha kulanka kordhisato halka Burnley ay baadi goobtay goolka barbaraha laakiin labadaba ma dhicin oo kulanka ayaa waqtigii loogu tala galay ku soo dhammaaday 2-1 ay guusha ku qaadatay Liverpool.
Kooxda macallin Klopp ayaana sidaas ku fadhisa kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, iyadoo leh 55-dhibcood 28 kulan oo ay ciyaartay.
LA LIGA: Barcelona oo guuldarro kala soo laabtay Deportivo La Coruna oo ay booqatay… + SAWIRRO
GOOGOOSKA: SSC Napoli vs Crotone 2-1 (Shaxda sugan)